हरेक कम्पनीका ब्लेडको डिजाइन एउटै राख्ने चलन कसरी शुरु भयो ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बजारमा दारी काट्न वा कपाल काट्नको लागि विभिन्न कम्पनीका ब्लेडहरु पाइन्छन् । तर, सबै कम्पनीको ब्लेडको बीचमा एउटै किसिमको डिजाइन बनेको हुन्छ । आखिर किन बनाउछन् त सबै कम्पनीले एउटै किसिमको डिजाइन ?
१९०१ मा जिलेट कम्पनीक संस्थापक, किङ्ग क्याम्प जिलेटले आफ्ना सहयोगी विलयम निकर्सनसँग मिलेर ब्लेडको डिजाइन गरेका थिए र त्यही सालबाट ब्लेडको औपचारिक उत्पादन शुरु गरियो ।
शुरुमा जिलेट मात्र यस्तो कम्पनी थियो जसले ब्लेड र ब्लेड राख्ने रेजरको निर्माण गरेको थियो । त्यो समयमा नटबोल्टको मद्दतले रेजरमा ब्लेडलाई फिट गरिन्थ्यो । त्यो समयमा नै ब्लेडमा यस्तो किसिसमको डिजाइन बनाइएको थियो । बिस्तारै जिलेट कम्पनीको कारोबार बढ्दै गयो । त्यसपछि अरु कम्पनीहरु पनि आउन थाल्यो । तर अरु कम्पनीहरुले नयाँ डिजाइन नबाई पुरानै डिजाइनलाई अनुसरण गर्न थाले ।
त्यो समयमा जिलेटमात्र एउटा यस्तो कम्पनी थियो जसले रेजर पनि बनाउँथ्यो । अरुले नयाँ डिजाइनको ब्लेड बनाए पनि त्यो ब्लेड रेजरमा फिट नहुने भएपछि किङ्ग क्याम्पको बनाएको उक्त डिजाइन नै अहिलेसम्म अनुसरण गर्दै आइएको छ । त्यसकारण आज पनि हरेक ब्लेडको डिजाइन एकै किसिमको हुन्छ ।